Maka: izaziso zokutyhala kweselfowuni | Martech Zone
Maka: izaziso zokutyhala kweselfowuni
Shoutem: Elona Platform yoPhuculo lweSoftware eyiNtsebenzo
NgoLwesihlanu, Meyi 8, 2020 NgoLwesihlanu, Meyi 8, 2020 Douglas Karr
Esi sesinye sezihloko endinothando olunzima ngokwenene ngalo xa kufikwa kubathengi bam. Iifowuni zeselfowuni inokuba sesinye sezicwangciso eziqhubeka nokufumana iindleko eziphezulu kunye nembuyekezo esezantsi kutyalo-mali xa yenziwe kakubi. Kodwa xa yenziwe kakuhle, inokuphakanyiswa okuphezulu kunye nokuzibandakanya. Yonke imihla malunga ne-100 yeeapps zilayishwa kwimarike, ngaphandle kwazo iipesenti ezingama-35 zenza ifuthe kwintengiso.
Ezi nkcukacha-manani kufuneka zichaphazele ukuJonga kwakho kweNtengiso yeFowuni
NgeCawa, ngo-Novemba 8, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ngaba ukhuphele uguqulelo lwamva nje lweSelfowuni App - i-iOS, i-Android? Sisasebenza ukwenza umxholo ukuba ube ngowakho kodwa isakhelo sikhona, kwaye ayikhange ithathe mzamo wokuyisusa emhlabeni ngenxa yesikhulumi esimangalisayo sohlelo lokusebenza lweselfowuni esivela eBluebridge! Siyavuya kakhulu ngamathuba! Sele sinee-podcast zethu zentengiso kunye nee-MarketingClips zethu zokwenza uthotho lwesicelo, nathi! Sikwapapasha imicimbi kwaye sinokuthumela
Inkqubo yendalo ephathekayo iqhume ngaphezulu kwesigidi seapps kule minyaka mithathu idlulileyo. Iinkampani ziyasokola ngexabiso lokufumana okuphezulu komsebenzisi kunye neqondo lokugcina eliphantsi. Ngaphantsi kwama-1% eeapps ezihambayo zibonelela ngembuyekezo elungileyo kutyalo-mali. I-Appboy sisisombululo esiqhutywa yidatha esenza ukuba abathengisi bohlelo lokusebenza lweselfowni benze iiprofayili zomsebenzisi ezityebileyo kubaphulaphuli babo abahambahambayo, emva koko babanike amandla okuthengisa iimveliso ezizenzekelayo: